Momba anay - Wenling Huwei Fan Factory
Any amin'ny tanànan'ny Taizhou, faritanin'i Zhejiang, Wenling Huwei Fan Factory misy mpiasa maherin'ny 200 no nifantoka tamin'ny indostrian'ny rivotra. Huwei dia manolotra vokatra mamorona amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny fahombiazany amin'ny motera fitsitsiana angovo vaovao, fitaovana milamina amin'ny tontolo iainana ary ny famolavolana flue rivotra havaozina. Izahay dia manome ny mpanjifa vokatra mahomby, mitahiry angovo, azo antoka ary azo itokisana eran'izao tontolo izao.
Manomboka amin'ny R&D, ny famolavolana bobongolo, ny fikapohana ny tontonana, ny fanindronana, ny fanamboarana môtô ka hatrany amin'ny fanangonana vokatra, manara-maso ny fifehezana ny kalitao amin'ny dingana rehetra izahay, mba hijanonana ireo tombony lehibe amin'ny kalitao, ny vidiny, ny faritra mahomby ary ny serivisy, izay mampitombo be ny tanjatsika sy fahaizan'ny fanoherana risika.
Vokatra lehibe-- mpankafy zavona, mpankafy indostrialy, mpankafy ventilator, mpankafy mandeha amin'ny axial, fanafanana entona SY heater herinaratra nahavita fanamarinana CE, ROHS, PSE, SAA, CCC. Ary ny vokatra rehetra dia aondrana any Moyen Orient, Eoropa, Aostralia, Azia atsimo atsinanana, Japon ary sns .. Amin'ny maha mpanaraka fatra-panaraka kalitao tena tsara antsika, amin'ny alàlan'ny fampidirana mitsivalana ny rojom-pifaneraserana, dia mampifangaro ny fiheverana amin'ny fikatsahana fahalavorariana amin'ny faritra rehetra izahay. ny vokatray.
Amin'ny maha orinasa vaovaon'ny teknolojia nasionaly azy dia manizingizina i Huwei amin'ny iraka ataontsika hanatsarana ny fari-piainan'ny olona, ​​hiara-miaina mifanaraka amin'ny natiora, hanatsara ny vokatra sy serivisy tsara kokoa, hanomezana toerana madio sy salama ary mahasalama ny tsirairay.